Indlu eyakhiwe emthini yeATL enebhafu enamanzi ashushu/indawo enamanzi ashushu - I-Airbnb
Indlu eyakhiwe emthini yeATL enebhafu enamanzi ashushu/indawo enamanzi ashushu
Indlu ekhiwe emthini sinombuki zindwendwe onguDarrel
Indlu eyakhiwe emthini ine-AC/Ubushushu/i-wifi
Igumbi lakho lokuhlambela elikwikhaya eliphambili
Azivumelekanga iipati /iindwendwe eziyi-2 ngamaxesha onke. Aluvumelekanga undwendwe olongezelelekileyo.
Indlu eyakhiwe emthini ihleli kumthi omdala oyi-400 yr. Iibheyisi ezindala eziyi-250 yr zixhasa isakhiwo esidadayo esiyi-25ft emoyeni. Iifestile ezinkulu ezibonisa ichibi neegadi. Ukubiya kwezinto eziyimfihlo kuvumela ukuba zodwa. Indlu yangasese enomgquba nesinki yakudala ngaphakathi kwindlu eyakhiwe emthini.
Iinkonzo ezongezelelweyo: Umpheki wabucala kunye nemasaji eyadini; ingcali yokuxuba
Ngenxa ye-coronavirus, senza unakonako ukuze sibulale iintsholongwane kwiindawo ezibanjwa qho ngaphambi nasemva kokubhukisha.
NCEDA UFUNDE YONKE INDLU , IMITHETHO YEKHAYA NENKCAZELO NGAPHAMBI KOKUCELA UKUBHUKISHA UZE UPHENDULE NGOMYALEZO OYIMFIHLO.
Ngaba ufuna ukwenza umcimbi? Ukufota, isidlo sangokuhlwa, umtshato nceda ubuze ngamaxabiso.
Buza malunga :
Iinkonzo zompheki wabucala.
zokuxuba izinto Siye sisebenzisana nenkampani yokuphulula izihlunu eza kunikezela ngeenkonzo kwindawo yakho.
Ngoxa indlu eyakhiwe emthini ibiyelwe ngasese, ibhafu enamanzi ashushu yinto enokusetyenziswa nangabanye abantu phakathi kwamakhaya amancinci ayi-5 asendlini. Ibhafu enamanzi ashushu ikwindawo yasegadini ibe isetyenziswa nangabanye abantu phakathi kwezinye izindlu ezincinci ezisendlini.
Vuka uye kwindawo entle enechibi lekoi kuzo zonke iifestile zale ndlu inabantu abathandanayo, ngaphambi kokuba wehle uye ezantsi ukuze uphumle. Ngokuhlwa, sela iglasi yewayini kwi-veranda, ubuke iindawo.
Ngaba ufuna iibhedi ezingakumbi? Sinezindlu ezincinci eziyi-5 kwindlu eyi-2.5 acre ezinokuhlala ukuya kutsho kwiindwendwe eziyi-15 kunye nezinto ezinokusetyenziswa ezisetyenziswa nangabanye abantu eziquka ibhafu enamanzi ashushu, indawo yokoja inyama, iigadi, ishawa ephandle kunye nepuli eyi-10k gallon koi.
27" HDTV ene-I-Amazon Prime Video, I-Fire TV
4.80 out of 5 stars from 359 reviews
4.80 · Izimvo eziyi-359
Indawo entle ethe cwaka, enamagqabi phakathi kwedolophu i-Atlanta kunye nesikhululo seenqwelomoya. Imizuzu eyi-15 ukuya kwidolophu yase-Atlanta, nemizuzu engaphantsi kwe-10 ukusuka kwisikhululo seenqwelo-moya sase-Atlanta. Nangona le ndawo yokuhlala yabucala yenye yezinto ezithandwa zindwendwe zethu, uza kubona ezinye izakhiwo zokuhlala ibe ngamanye amaxesha usenokubona ezinye iindwendwe xa zingena okanye ziphuma endlini.
Umbuki zindwendwe ngu- Darrel
Izimvo eziyi-2 148
Sidibana nazo zonke iindwendwe zethu. Sikhona ukuze sincede undwendwe ngexesha lokuhlala kwalo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- East Point